Ogaden News Agency (ONA) – Dhabarjab horleh oo soo gaadhay cadawga
Dhabarjab horleh oo soo gaadhay cadawga
War dagdag ah oo saacada ka hor uu na soo gaadhsiiyay wariyaha wakaalada wuxuu ku sheegay in goor-dhaweyd lagu gubay gaadhi waday ciidan farabadan oo Wayaane ah inta u dhaxaysa Shilaabo iyo Haarcad oo ka tirsan gobolka Qoraxay. Warku wuxuu intaa ku darayaa in gaadhigan oo ciidamo hawl gaar ah u socday ay ka buuxeen wax ka baxay oo ka badbaaday uusan jirin.
Sidoo kale waxaa 10/10/2011 lagu gubay gaadhi inta u dhaxaysa Gurdumi iyo Awaare. Gaadhigan oo ahaa nooca daabula ciidamada ayaa loo adeegsaday miinada nooca meesha fog laga hago, iaydoo sida ay sheegeen fuliyayaashii falkaas aan xataa laga araga bir muuqata oo ishaysata.
Labadii todobaad ee la soo dhaafay waxaa cadawga lagu qaaday 15 weerar oo isugu jira dhamaan hawlgalada CWXO, waxaana cadawga lagaga dilay inta la soo tirakoobay 109 askari iyo dhaawac gaaraya ilaa 150. Waxaa kaloo jiray ugu yaraan 4 gawaadhida ciidamada qaada ee loo yaqaano Ural-ka iyo wixii saarnaa in lagu gubay.
Halkan kala socda wixii ka soo kordha hawlgalada CWXO ay ku naafaynayaan cadawga iyo maxaysatada la socota.